ပန်းခရေ: ရူးသွပ်မှုများစွာထဲမှ ရူးသွပ်မှုတစ်ခု.......
ကျမနဲ့သူရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက သာမာန်သမရိုးကျတွေ့ဆုံမှုသာပါ..။ သူငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆက်ပေးရင်း ခင်မင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် …။ ရည်းစားတွေထည်လဲတွဲ…အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို မခံစားတတ်တဲ့ သူ…. မိန်းမလှများစွာ
ဘေးနားမှာ အမြဲရှိနေတတ်တဲ့ ဒေါင့်မကျိုးတဲ့ သူ… ရည်စားတစ်ယောက်ကို တစ်လထက် ပိုမတွဲတတ်တဲ့သူ…မိန်းမတွေကို အထင်မကြီးမလေးစားတတ်တဲ့သူ… ဒီလို.ခပ်ပေပေ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်သူဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ စာဂျပိုးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းစာ ကိုသာ ကောင်းစွာနားလည်တတ်ပြီး အချစ်ဘာသာကို မတတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျမ…. သာမာန် ရွက်ကြမ်းရေကျိုမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျမ… ဘယ်လို နှောင်ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်တွယ် ရစ်မှန်းမသိတွယ်ရစ်မိလိမ့်မယ်လို့ ဘာကြောင့် မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါလိမ့်..။
ခပ်ဂျစ်ကန်ကန်ပုံစံတွေကိုသဘော ကျတတ်တဲ့ကျမအတွက်သူ့ရဲ့ဂျစ်ကန်ကန်ပုံရိပ်ဟာ ထူးဆန်းစွာသဘောကျစရာ ဖြစ်ခဲ့ တယ်…။ ကျမနဲ့စဆုံစဉ်မှာ သူ့စိတ်ထဲမှာ ကျမဟာ သာမာန်မိန်းကလေးတစ်ယောက် မျှသာ နေရာရခဲ့တယ်..။ သူ့ဘေးနားက နံပါတ်စဉ်တွေနဲ့ပျော်မြူးနေတဲ့ သူ့ကို သူငယ် ချင်းတစ်ယောက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ သူ့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာ သဘောကျခဲ့မိ တယ်…။ ကျမတို့တွေရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ၃လအတိုင်းအတာကို ရောက်ချိန်ထိအောင် မထူးခြားခဲ့ပါဘူး..။ ကျမတို့အဖွဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်သွားလာမှုမှာလည်း သူ့ကို တိတ်ဆိတ်စွာ ခိုးကြည့်ရင်း ကျမကျေနပ်ခဲ့ရတယ်..။
ကျမတို့အဖွဲ့ဆိုင်ထိုင်ရင်း မိုးတွေရွာလာခဲ့တယ်..။ မိုးရေကိုသိပ်ကြိုက်တဲ့ ကျမက မိုးရေထဲမှာ ဆက်လက်ထိုင်ချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းမရခဲ့ဘူး..။ အားလုံးကို မိုးရေထဲမှာဆက်ထိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်မိချိန်မှာ ကျမကို အရူးတစ်ယောက်လို ကြည့်ရင်း တစ်ယောက်ကမှ သဘောမတူခဲ့ဘူး..။ အဲဒီအချိန်မှာ သူရဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ကျမအလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်..။
“ မင်းမိုးရေထဲမှာ ဆက်ထိုင်ချင်တယ်ဆို ဆက်ထိုင်ပါ……။ ကိုယ်က မင်းအတွက် ပြိုင်ဘက် လုပ်ပေးမယ်…။ မိုးကအရမ်းသည်းနေတယ် ဘယ်အချိန်တိတ်မယ်မှန်းမသိဘူး ဆိုတာတော့ မင်းသိတယ်မလား…။တစ်ခုတော့ ကတိတည်ရမယ်… ကိုယ်နိုင်ရင် မင်းကိုယ်တောင်းဆိုတာကိုပေးရမယ်.. ဘယ်လိုလဲ..’’ ထီမထင်မျက်နှာနဲ့ သူ့မျက်လုံးက လှောင်ပြုံးတွေကို ကျမ ခပ်တည်တည်စိုက်ကြည့်ရင်း ……………
“ ကောင်းပြီလေ…ကျမကို အဖော်လုပ်ပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့…။ ကျမသဘော တူပါတယ်..။ ’’ သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ တားမြစ်သံကို လစ်လျူရှုရင်း ဆက်ထိုင်နေခဲ့မိတယ်။ ဒီလိုမိုးထဲမှာ ထိုင်ခဲ့မိတဲ့ အကျိူးက သူနဲ့ကျမအတွက် ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့မယ်မှန်း အစကသိခဲ့ရင် ကျမထိုင်ခဲ့မိမယ်မထင်ဘူး..။ အဲဒီနေ့က မိုးတွေ တော်တော်နဲ့မတိတ်ခဲ့ပါဘူး..။ မိုးရေထဲမှာ နှာချေရင်း အချမ်းဒဏ်ကို အံတုခံခဲ့တဲ့ ကျမကို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း သူ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်နဲ့ တူတယ်လို့ နာမည်တပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှာ သိခဲ့ရတယ်…။
အဲဒီနေ့က သူလည်းမနိုင်ခဲ့သလို ကျမလည်းမရှုံးခဲ့ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့မှာတော့ သူစစ်ဆေးရုံကို ၃ရက်တက်လိုက်ရတာပါပဲ…။ ကျမကတော့ အမြဲတမ်း ချူချာနေကြဖြစ် လို့ အအေးမိဖျားနာရုံနဲ့ပြီးသွားခဲ့တယ်..။ သူဆေးရုံတက်ရချိန်မှာ ကျမရင်ထဲကို ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပါပဲ အပူတွေဆင့်ပွားမိတာလည်း အခါခါပါပဲ…။
ဒီကစားပွဲကနေ ကျမထိတ်လန့်စွာ သတိထားမိတာကတော့ ကျမသူ့ကို ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ စချစ်မိတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်ရပဲ ချစ်မိသွားပြီဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကလေး…။ ကျမသူ့ကိုချစ်မိသွားပေမယ့် ကျမကိုမချစ်တဲ့သူ့အတွက် ရှေ့ဆက်ဖို့ ကျမအတွက် နေရာမရှိခဲ့ပါဘူး…။ ကျမသူ့ကို အဖြူသက်သက်ချစ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတာကိုလည်း နောက်ပိုင်းမှ ပိုသိလာခဲ့ရတယ်..။ ကျမရဲ့မေတ္တာ ၊ သစ္စာတွေအားလုံးကိုလည်း ကျမတစ်ယောက်တည်း တိတ်ဆိတ်စွာ ပြန်လည် သိုဝှက်ထားခဲ့ရတယ်…။ သူကတော့ထုံးစံအတိုင်း သူ့လုပ်ရပ်တွေကို မငြီးမညူလုပ်ဆောင်ရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးပစ်ခဲ့တယ်…။
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့ဖြတ်သန်းလာလိုက်တာ သူဟာ ကျမအတွက် ကျမလို အပ်ချိန်တိုင်း မသိလိုက်မသိဘာသာ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်အဖြစ် ၄င်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ၄င်း ရပ်တည်ပေးခဲ့တယ်..။
တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ဘက်ကစတင်ပြီး ..ကျမကို စိန်ခေါ်မှု ပြုခဲ့တယ်..။
“ ပိုး …. မင်းနဲ့ငါ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ပြိုင်ကြမယ်…။ မင်းနိုင်ခဲ့ရင် ငါ့ကိုမင်းတောင်းဆိုတာ ငါလုပ်ပေးမယ်…။ ငါနိုင်ခဲ့ရင် ငါတောင်းဆိုတာကို မင်းလိုက်လျောရမယ်…။’’ ကျမမျက်လုံးတွေ အံ့သြမှုတွေဖုံးလွှမ်းရင်း သူ့ကို မော့ကြည့်ခဲ့မိတယ်…။
“ပြောကြည့်လေ…နင့်ပြိုင်ပွဲက ဘယ်လိုပြိုင်ပွဲမျိုးလဲဆိုတာ….. ’’
“နင်လုပ်နိုင်မှာပါ….။ ဘာလဲဆိုတော့ နင်ငါ့ချစ်သူအဖြစ် ၁ရက်လောက်နေပေးပါ…။ ’’
“ ဘာ…………..’’သူ့စကားသံအဆုံးမှာ ကျမမျက်လုံးတွေပြာကုန်တယ်… စိတ်တွေလည်း ယောက်ယက်ခတ်ကုန်တယ်..။ မဖြစ်နိုင်တာ တစ်ကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တာ …။ သူကျမစိတ်ကို သိနေလို့များ စော်ကားလိုက်လေသလား…။
“ငါတစ်ကယ်ပြောနေတာပိုး…..ဘယ်လိုလဲ နင်သတ္တိမရှိဘူးလား…။ ’’သူ့စကားသံတွေကို နားထောင်ရင်း ပြောထွက်ရဲခဲ့တဲ့သူ့ကို အံ့သြမိပါရဲ့…။နင့်မှာ တခြားချစ်သူတွေမရှိတော့ဘူး တဲ့လား မင်းထင်ရယ်….။
“ဟေ့ ပြောလေကွာ…မင်းကငါတစ်ခါမှမတွဲဖူးသေးတဲ့ အသစ်အဆန်းလေးမို့ ငါဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ သခင်မအဖြစ် ခန့်လိုက်တာနော်…မင်းစဉ်းစားပေါ့…။ ’’
“ကောင်းပြီလေ…ငါစဉ်းစားမယ်…။ ဘယ်နေ့လဲဆိုတာ ငါ့ကိုပြောခဲ့ ဘယ်နေရာလဲ…။ ’’
“လာ မယ့်စနေ…မင်းတို့ကျောင်းကန်တင်း… ’’
ဘယ်လိုမှကို အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ကျမဘာကြောင့်များလက်ခံ ဖို့စဉ်းစားခဲ့တာလဲ…။ သဘာဝမကျတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ကျမဘယ်လို ဆက်လက်ကပြရ မလဲ…။ ဒါပေမယ့်……..
“ငါကလာမယ်တောင်ထင်မထားဘူး…။ မင်းကဒီလိုလာလိုက်တော့ ငါ့အနေနဲ့ တစ်နေကုန် မင်းကို ငါ့ချစ်သူအဖြစ် နေပေးရမှာ ပျင်းလိုက်တာကွာ…။ ငါ့ပြိုင်ပွဲမှာ ငါအလွယ်တကူ ရှုံးမယ်ဆိုတာ သိရဲ့နဲ့ ငါတမင်ပြိုင်လိုက်မိတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလားလို့ကွာ… ခုတော့ ……………. ’’
“ကဲပါပိုးရယ်…ငါ့ရှုံးပြီ….ပြောနင်ဘာလိုချင်လဲ ’’ထီမထင်မျက်နှာနဲ့ မေးလိုက်တဲ့ သူ့အသံ ကို ဆက်လက်ကြားနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူး…။ ကျမရှက်လိုက်တာ သူသိပ်စော်ကားတာပဲ ကျမကို သူသိပ်အထင်သေးတာပဲ…။
“နင့်ပေါ်မှာ ငါအကြွေးရှိတယ်လို့ပဲ မှတ်ထားပေးပါ မင်းထင်……. ’’ပြောပြီးလှည့်အထမှာ
ကျမမျက်လုံးတွေပြာဆင်းရင်း လောကကြီးကို ခေတ္တခဏ မေ့လျော့သွားခဲ့တယ်…။
“ဟာ…ပိုး…ပိုး… ’’သူ့ရဲ့အသံကို နောက်ဆုံး ကြားယောင်ရင်း……….
“ပိုး..ပိုး…ငါနင့်ကိုစတာ …ဟာ ပိုး ထပါ ထပါကွာ အဲလိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့ကွ..မင်းကချစ်စရာ ကောင်းအောင် သိပ်စချင်လောက်အောင် အခဲ့လို့ ငါမင်းကိုစတာပါကွာ…. ’’ကယောင်ကတမ်း ယောင်ယမ်းအော်ရင်း…လက်ထဲမှ ပိုးကို တစ်ဖွဖွခေါ်နေတဲ့ မင်းထင် အော်သံကိုလည်း ပိုးမကြားနိုင်တော့ဘူး…။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီး …တစ်လအကြာမှာတော့ ကျမစိတ်တွေ ပုံမှန်လည်ပတ်ခဲ့တယ်..။ ရှက်လွန်းအားကြီးလို့ ကျောင်းတောင် ပြန်မတက်နိုင်ခဲ့ဘူး..။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးရဲ့ မျက်နှာကိုလည်း မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး…။ သူလာတိုင်းလည်း ပတ်ပြေးရတဲ့ ဒုက္ခကိုလည်းခါးဆီးခံစားတတ်ခဲ့ပြီ..။ သူ့စကားသံတိုင်းကိုလည်း ကြောက်ရွံ့တတ်ခဲ့ပြီ…။ သူ့အမူအရာတိုင်းကိုလည်း မုန်းတီးတတ်ခဲ့ပြီ…။
သူဟာ ကျမအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ စီစဉ်ရေးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့ ဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှ မဟုတ်ခဲ့တာ….။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အချစ်နဲ့အတူ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေတဲ့ တန်ခိုးရှင် သက်သက်သာပါ…။
ကျမသူ့ကို မနာကြည်းနိုင်ပဲ ကြောက်ရွံ့ခဲ့မိတယ်…….။
အချစ်တွေဖောဖောသီသီများပြီး သိပ်ချစ်တတ်တဲ့သူနဲ့ ရှားပါးစွာချစ်မိသွားတဲ့ ကျမ အတွက် မှားယွင်းစွာ ပေးတွေ့ဆုံတဲ့ ကံကြမ္မာကိုပဲ ရိုးမယ်ဖွဲ့ အပြစ်ဆိုရမလား..။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို တစ်ဖွဖွရွတ်ဆိုရင်း အဓိပ္ပာယ် တိကျစွာ မသိတဲ့ သူ့အတွက် အချစ်စစ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုအစစ်အမှန်ကို တိကျစွာမသိရှိနိုင်တာ ကျမအတွက် ကံဆိုးမှုတစ်ခုတဲ့လား..?။
နာမည်လေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ….ပိုးရွှေဝါတဲ့လား… သူမက ကျနော့်အတွက်.. သာမာန် ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်မျှသာနေရာယူခဲ့တာပါ..။ ပိုးကို ကျနော် သတိထားမိခဲ့တာ နာမည်လေး တစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တာ သာမာန်သာပဲ..။ ပိုးနဲ့ခင်ရတာ စိတ်ထဲမှာတော့ ပျော်ရွှင်မိတယ်…။ ပိုးက သိပ် အတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ ကြာလေ ပိုသိလာတယ်..။ ပိုးဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာ တစ်ပုဒ်ကို စတင်စိတ်ဝင်စားမိတာ… မိုးရွာထဲမှာ အတူထိုင်ခဲ့ချိန်ကပေါ့..။ အချမ်းဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်း မိုးရေထဲမှာ ပျော်မြူးနေတဲ့ ပိုးရဲ့ပုံရိပ် လေးဟာ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲထင်သွားခဲ့မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး..။ ဒါကိုလည်း အချစ်စစ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး..။ ပိုးကိုချစ်တဲ့အချစ်က ရယူလိုမှု ပိုင်ဆိုင်လိုမှု မပါဝင်ခဲ့ဘူး..။ ပိုးမသိအောင် တိတ်တစ်ဆိတ် ခိုးကြည့်ရင်း ပိုးနဲ့အတူ ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ရင်း ပိုးအနားမှာ နေရချိန်လေးကို တက်မက်လာတယ်..တွယ်တာလာခဲ့တယ်..။ အရာတိုင်းကို ထူးဆန်းစွာ ပြုမူတတ်ခဲ့တဲ့အကျင့်အတိုင်း ပိုးကို ချစ်နေမိပြီမှန်း သိပြီးနောက်မှာ ပိုးကို ဖွင့်မပြောဖို့ ထိန်းချုပ်ရင်း၊ ပိုးရဲ့ မယုံကြည်မှုကို လက်မခံနိုင်ရင်း… ပိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကို မျိုသိပ်ထားခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် ပိုးကို ဖွင့်ပြောဖို့ အကြောင်းအရင်းက တွန်းအားများလာတော့ ဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားမိခဲ့တယ်..။ သူများနဲ့မတူအောင်လည်း ဖွင့်ပြောချင်ခဲ့တယ်..။ ထုံးစံအတိုင်း ပိုးကိုစိန်ခေါ်ပွဲလေးပြုပြီး…ပိုးကိုရင်ဖွင့်ဖို့ ရည်ရွယ်မိခဲ့ ပေမယ့်…ပိုးကိုစချင်စိတ်…ပိုးကိုဖွင့်ပြောဖို့ အရှိန်ယူရမှုနဲ့ အရာအားလုံး မထင်မှတ်စွာ ကံကြမ္မာကြီးက လှည့်စားခဲ့တယ်..။ ကျနော်ချစ်မိတယ်ဆိုတာ ပိုးလုံးဝမသိခဲ့ဘူး…။ ပိုးရယ်
မင်းရဲ့ဖြူစင်တဲ့အမူအရာလေးတွေ..ကိုယ့်ကိုခိုးခိုးကြည့်တတ်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ချစ်ခဲ့မိတယ်ပိုးရယ်…။ ဘယ်သူမှမသိခဲ့ပေမယ့် ကျနော့်နှလုံးသားလေးတော့ သိခဲ့တယ်..။ ချစ်တယ်ပိုးရယ်………ဒါပေမယ့်……ကျနော် ဖွင့်ပြောခွင့်မရခဲ့ပါဘူး..။ ဖွင့်ပြောတော့မှာ လည်းမဟုတ်တော့သလို ကျနော့်အချစ်တွေကိုလည်း သူသိချင်လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့မိဘူး။ မိုးရေထဲမှာ မသိဆိုးဝါးစွာ လိုက်ရှာမိတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ နဲ့ နှလုံသားရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေမယ့် ပိုးကိုချစ်မိတယ်လို့ သိသွားပြီးချိန်ကစလို့ ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ ထပ်ချစ်မရတော့တာ... တိတ်ဆိတ်စွာ သစ္စာရှိနေတာတွေအားလုံးကို ပိုးမသိခဲ့ပေမယ့် ပိုးသိဖို့ မကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ပိုးနှလုံးသားလေးကတော့ ခံစားတတ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မျှော်လင့်ဆဲပါ.... ။’’
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အချစ်ဆိုတာ လှည့်စားတတ်တဲ့ သက်တန့်လေးတဲ့လား…? အချစ်ဆိုတာနဲ့ ဆုံဆည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရပေမယ့်.. အချစ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ အကြောင်းကံမပါ တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် အလှဆုံးသော အိမ်မက်တစ်ပုဒ်ကို မက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရတော့မှာလား..။ ကိုယ်ကချစ်မှန်းသိရဲ့နဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်မှန်းသိရဲ့နဲ့ ချစ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကိုလည်း တစ်ဆိတ်ကြောက်ရွံ့မိပြန်တယ်..။ ရင်ခွင်မှာရှိတဲ့ ဝေဒနာကို ထုတ်ပြခွင့်မရခဲ့ပဲ စကားလုံးတိုင်း ပျောက်ဆုံးဆိတ်သုန်းနေခဲ့မိခဲ့တာလည်း ကံတရားပဲ လား..?..။အရာအားလုံး ပြီးဆုံးသွားပေမယ့် တစ်ယောက်ရင်ထဲက ခံစားချက်အားလုံး မပြီးဆုံးသွားနိုင်တာ လေးနက်တဲ့အချစ်တစ်ခုပဲလား?.။ ဘယ်လောက်မုန်းတီးနာကြည်းအောင် လုပ်ခဲ့မိပါစေ.. မမုန်းတီးမနာကြည်းနိုင်တာလည်း အချစ်တစ်ခုပဲလား...?။ အရာအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်သည်းခံရင်း တိတ်ဆိတ် စွာ ချစ်မိသွားတဲ့ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ကင်းစွာ ချစ်မိသွားတဲ့ အချစ်တစ်ခုအတွက် ရူးသွပ်မှုတစ်ခုလို့ ခေါင်းစဉ် တပ်မယ်ဆိုရင်လည်း... ဒီအဖြစ်အပျက်လေးရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုဟာ ရူးသွပ်မှုများစွာထဲက ရူးသွပ်မှုတစ်ခုပါ...........။
ရင်ခုန်ဖွဲ့သီသူ ပန်းခရေ ရေးဖွဲ့ခဲ့ချိန် 3:10 PM
အချစ်ဆိုသည်မှာ..... အင်း...ငါလဲ သေချာမသိဘူး.... :(
မိုက်တယ်ဟ။ ဒါမျိုးတွေလဲ ရတယ်နော်....။
ကိုယ်တွေ့လား... သူများတွေ့ လား
ရှင်းအုံး.. ရှင်းအုံး.. ဖြစ်ရပ်မှန်လားဟေ့ :)
ကောင်းတယ်.. သေချာကိုဖတ်ပြီးမှပြောတာ .. စာကိုပြောတာနော်
အင်းဒီတစ်ပိုဒ်ရေးတာတော့ရှယ်ပဲ အချစ်ကိုခံစားတတ်နေတယ်ပေါ့လေနော်။ ဟုတ်လားမပန်းရေ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။မိုက်တယ်ဗျို့။